January 2021 - Bright News
မဲလ်ဘုန်းမြို့ရဲ့ အလှတရားကို အချိန် (၃) နာရီအကြာ အတူတကွခံစားခဲ့ကြတဲ့ ပင်ဂွင်းစုံတွဲ
January 31, 2021 Software Kaber 0
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် နိုင်ငံအတော်များများတွင် Lockdown ချထားတာကြောင့် လူအများဟာ မိမိတို့ရဲ့ ဘဝတွေကိုရော ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ အရာတွေကိုပါ လေ့လာဖို့ အချိန်တွေရခဲ့ကြပါတယ်။ယခုချိန်မှာတော့ ယခင်က သင့်ဘေးမှာအတူရှိနေတဲ့သူတွေဟာ ရုက်တရက် ခွဲခွာသွားနိုင်တာကြောင့် အတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့ကိုပိုပြီး တန်ဖိုးထားတတ်လာကြပါတယ်။ ထိုကြောင့်လူတွေဟာ ယခင်ကထက်ပိုပြီး လူအများကိုနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေတာကတော့ အံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။ […]
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လျှာဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းများစွာပြောပြနိုင်ပါတယ်။လျှာရဲ့ပုံစံ၊အရွယ်အစားနဲ့အရောင်ပေါ် မူတည်၍ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ထိုလျှာကပြောပြပေးတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကဘယ်အရာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ အောက်ကအချက်လေးတွေကိုဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ရအောင်။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
January 30, 2021 Software Kaber 0
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ၏လေ့လာချက်များအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပင်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄၂၂၀၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်။အမျိုးမျိုးသောပန်းများ၊အပင်များ၊အရောင်များ၊ပုံစံများနှင့်အရွယ်များကို မြင်တွေ့ရသည်က အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဇီ၀မျိုးကွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ အပင်များကို မြင်တွေ့ရတဲ့အခါ တစ်ခြားဂြိုလ်ကလာတဲ့အပင်တွေလားလို့တောင်ထင်ရပါတယ်။ (၁)Hydnora africana (ပိုးတောင်မာထောင်ချောက်) ထိုအပင်ကိုတော့ အာဖရိကတောင်ပိုင်းတွင် အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။၎င်း၏အဓိက အစိတ်အပိုင်းမှာ ဝဖြိုးနေတဲ့ ပန်းပွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် ၎င်း၏ဆိုးဝါးလှတဲ့အနံများနှင့် […]
(၁)ကနေဒါနိုင်ငံမှ ၁၂၅ နှစ်သက်တမ်းရှိ ရူရိုဒင်ဒရိုသစ်ပင် (၂)မှိုပုံစံ သစ်ပင် (၃)ထိကရုံးအကြီးမျိုးနွယ်ဝင်သစ်ပင် (၄)ဖိလစ်ပိုင်မှာရှိတဲ့ နွယ်​တွေနဲ့ သစ်ပင် (၅)​ရေ​အောက်ပေါက်နေတဲ့ သရက်ပင်ငယ်​လေးများ။ (၆)မာဒါဂက်စကာမှာရှိတဲ့ baobab သစ်ပင်ကြီးများ။ (၇)Caddo ရေကန်ထဲမှာပေါက်နေတဲ့ ၁၂ရာသီအရွက်စိမ်းနေသောထင်ရှုးနွယ်ဝင်သစ်ပင်တစ်မျိုး။ (၈)ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ခရမ်းနု​ရောင်ပန်းပွင့်​သောသစ်ပင်တစ်မျိုး။ (၉)Socotra ကျွန်းရှိ ပုလင်းသစ်ပင်များ (၁၀)ဟာဝိုင်ယီရှိ သက်တံယူကလစ် […]
ယနေ့ခေတ် ဒီဂျစ်တယ် ဓာတ်ပုံ များခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ အရာအားလုံးကိုလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။ယခုပိုစ့်မှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူများ၏ လူမှုကွန်ယက်အကောင့်များတွင် တင်ထားကြတဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံရိုက်နည်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. […]
ကံတရားရဲ့ Suprise တိုက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသူများ
January 29, 2021 Software Kaber 0
တစ်ခါတရံမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကံတရားဟာ ကျွန်တော်တို့အား ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တွေ့ကြုံခံစားခိုင်းစေပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ ကံတရားရဲ့ Suprise တိုက်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ သူတွေအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဘယ်သူကိုရွေးပြီး ခေါင်းခွဲရမလဲဆိုတာကို စောင့်နေတဲ့ အုတ်တစ်ချက်။ (၂)ဘယ်သူကများ ဘတ်စကတ်ဘောကစားချင်လည်း? (၃)စာတိုက်ပုံးထဲမှာ စာလာယူလိုက်လို့ကတော့ကိုက်ခံထိပြီ။ (၄)အထဲမှာ ခွက်တစ်ခုပြန်ပါလာတဲ့ရေခဲမုန့်။(ဂျင်းထည့်ခံရတာ) […]
January 28, 2021 Software Kaber 0
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအလုပ်ကိုရုန်းကန်ပြီး လုပ်ကိုင်နေကြပြီး လက်တွေ့မှာတော့ အလုပ်တစ်ခုကိုစတင်လုပ်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမြဲလိုလို မှားယွင်းနေကြပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုသည် လူတစ်ဦး(သို့မဟုတ်) စက်ကိရိယာတစ်လုံးမှပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ အမှားများကိုရိုးရှင်းစွာ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းပေါင်း များစွာ ရှိပါတယ်။ (၁)မိုးရွှာသွန်းလိုက်လို့ရေဆင်းပိုက်နေရာပွင့်ထွက်လာပုံ။ (၂)ကတော့ချွန်ပုံစံလမ်းပြတဲ့အရာကိုလပေါင်းများစွာထားပြီးတော့မှဖယ်လိုက်သောအခါ။ (၃) ငှက်ပျောသီးမဟုတ်ဘူးနော် ရှည်လျားတဲ့အဝါရောင်အရာဝတ္ထု။ (၄)ဝိုင်ပုလင်းတွေနေရာမှာရေဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လာထောင်ထားပုံ။ (၅) ရေဆင်းပေါက်ကကုန်းမြင့်မှာကျန်နေသောအခါ။ (၆) အာဖရိကမြေပုံကြီးနဲ့အာရှလို့ရေးထားသောအခါ။ […]
အမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်ဘာကြောင့်အသက်ရှည်နေရလဲဆိုတာကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးမယ့်ဓာတ်ပုံလေတွေကသက်သေပြနေပါတယ်။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. […]
January 27, 2021 Software Kaber 0
ခေတ်သစ်နည်းပညာများဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝကို အကောင်း အဆိုး နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဗဟုသုတနဲ့သတင်းအချက်အလက်များအတွက် အရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေတဲ့နေရာတွေမှတော့ာခေတ်သစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာများဟာအရမ်းကိုအသုံးဝင်လှပါတယ်။ သို့ပေမယ့် နည်းပညာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး နှင့်မိတ်ဆွေများအကြားလူမှုဆက်ဆံရေးကိုနှောက်ယှက်လာတာကိုတော့သတိမထားမိကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဖုန်းများ ၊လက်ပ်တော့များ ဗီဒီယိုဂိမ်းများဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းတွေနေရာကိုအစားထိုးရမယ့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ယခုဖော်ပြမယ့်ရုပ်ပြတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့နောက်မကျသေးခင်မှာပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေကိုထောက်ပြလို့နေပါတယ်။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. […]
အချိန်ကိုက်ကွက်တိ ရိုက်ကူးထားနိုင်တဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံများ
လူအများစုဟာ ကျွန်တော်တို့အား အချိန်ကိုက်ကွက်တိရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအံ့ဩစရာအဖြစ်ယူဆောင်လာပေးတတ်ပါတယ်။ထိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေကိုတော့ ယခုဆောင်းပါးကနေပရိသတ်ဆီကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. […]
နေမဝင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က နိုင်(၅)နိုင်ငံ
ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အင်မတန် လှပတဲ့အရာတွေ ပြန့်ကျဲနေကြောင်း သက်သေပြသွားတဲ့ ဓာတ်ပုံ (၁၇) ပုံ